Mitsitsia vola 100 euro amin'ny fividianana ny 27K iMac | Avy amin'ny mac aho
Mitsitsia vola 100 euro amin'ny fividianana ny 27K iMac 5-inch anao
Omaly dia niresaka momba ny safidy hividianana vaovao isika MacBook Air Miaraka amin'ny mpikirakira M1 ny fihenam-bidy, androany dia te-hitondra fihenam-bidy mahaliana € 100 hafa isika amin'ny fividianana iMac vaovao. Amin'ity tranga ity dia a 27-inch 5K iMac Retina misy RAM 8GB sy fitehirizana 256GB SSD ao anatiny.
Raha ny lojika, ity fitaovana ity dia miaraka amin'ny endrika taloha fa ny maodely 27-inch dia tsy misy miaraka amin'ilay endrika vaovao. Mazava ho azy ireo ekipa ireo ihany koa Niampy ny processeur Intel tsy manana ilay Apple M1 ao anatiny izy ireo saingy tsy olana izany satria miasa tsara tokoa izy ireo.
Eto ianao dia afaka mahazo ity iMac 27-inch ity miaraka amin'ny fihenam-bidy 100 euro
Mividy iMac 27-inch izao?
Iray amin'ireo fanontaniana izay apetraka matetika amintsika ary sarotra ny mamaly noho ny antony maro. Ny voalohany dia izay Tsy mazava ny fotoana hanombohan'ny Apple ny maodely iMac 27-inch vaovao ary tsy dia fantatra loatra ny vidiny tokony ho azon'izy ireo, ny fepetra arahana sns ... Ka ny fanararaotana ny tolotra rehetra azontsika jerena amin'ny Internet dia mety ho tsara foana raha tsy maintsy mahazo ny iray amin'ireo iMac ireo isika.
Toy ny mahazatra, ny zava-dehibe dia ny mijery raha tena mila an'io fitaovana io dieny izao ianao na afaka miandry mandra-pividin'ny maodely vaovao.. Miandrasa afaka manao izany foana ianao satria ianao no manapa-kevitra, mazava ho azy fa raha mila ny fitaovana ianao dia mila mahita ny safidy fividianana tsara indrindra ary amin'ity tranga ity dia ity. Raha mbola manangona vola kely amin'ny fividianana fitaovana Apple isika dia raisina ary ny € 100 dia toa tsy voalaza firy izany, saingy tahiry be dia be izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Mitsitsia vola 100 euro amin'ny fividianana ny 27K iMac 5-inch anao
Apple Watch dia manampy amin'ny fandefasana mandritra ny sidina transoceanic
Apple dia mitazona ny zony hivoaka avy lavitra ho an'ny Apple TV +